इमरान खानको सरकार ढल्यो भने पाकिस्तानमा के हुन्छ ?
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान आफ्नो राजनीतिक करियरको सबैभन्दा कठिन चरणबाट गुज्रिरहेका छन् । आज पाकिस्तानको संसदमा उनीविरुद्ध प्रतिपक्षले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि भोटिङ हुँदैछ । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई आर्थिक अराजकताको आरोप लगाएका छन् ।
पछिल्लो समय पाकिस्तानको राजनीतिमा सबै चाल चलिरहेको छ । एकातिर खानको विरुद्धमा प्रतिपक्ष उभिएको छ भने अर्कोतिर उनको पार्टीभित्रका धेरै नेताहरु पनि उनको विरोधमा अगाडि आएका छन् ।
सत्तारुढ तहरीक–ए–इन्साफ पार्टीको सरकारबाट धेरै सहयोगीहरूले एकपछि अर्को गर्दै समर्थन फिर्ता लिएका छन् । संसदको तथ्यांक हेर्दा माथिल्लो हात विपक्षीतर्फ झुकेको देखिन्छ । प्रतिपक्षको अविश्वासको प्रस्तावलाई ३ सय ४२ सांसद रहेको राष्ट्रियसभामा १७२ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्टको विपक्षमा गएपछि विपक्षीसँग अहिले १७५ सांसदको समर्थन छ ।
इमरान खानसँग अहिले जम्मा १ सय ६४ सांसद छन् ।
भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने वाचाका साथ जुलाई २०१८ मा सत्तामा आएका इमरान खान बिना लडाइँ कुर्सी छाड्न चाहँदैनन्। गत आइतवार उनले इस्लामाबादमा एक ठूलो र्‍याली गरे, जसबाट यो देखिन्छ कि उनी अझै पनि आफ्ना समर्थकहरूमाझ धेरै लोकप्रिय छन्। त्यस र्‍यालीमा उनी आफ्ना कट्टर प्रतिद्वन्द्वी नवाज शरीफ र आसिफ अली जरदारीको विरुद्धमा प्रहार गरिरहेका थिए । खानले भीडलाई एउटा पत्र पनि हल्लाए, जसमा “विदेशी षड्यन्त्र” को प्रमाण रहेको आरोप लगाइएको थियो।
सेनासँग लड्ने ?
इमरान खानले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी खोज्न विदेश हेर्नुपर्दैन । कीर्तिमानी मुद्रास्फीति र अनियन्त्रित वैदेशिक ऋणका कारण उनको सरकारले जनताको समर्थन गुमाएको छ ।
उजायर युनुस वाशिङटनमा रहेको एट्लान्टिक काउन्सिलका निर्देशक हुन्। उनी भन्छन्, ‘मुद्रास्फीतिलाई यसरी हेर्नुहोस्, जनवरी २०२० देखि मार्च २०२२ सम्म भारतमा खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशत छ। यस अवधिमा पाकिस्तानको मुद्रास्फीति दर २३ प्रतिशत रहेको छ।’
तर इमरानको पाकिस्तानी सेनासँगको सम्बन्धमा दरार आएपछि उनको पतन स्पष्ट देखिन्छ । यो त्यही सेना हो जसलाई इमरान खानलाई सत्तामा ल्याउन जिम्मेवार भनिएको छ । तर, इमरान र सेना दुवैले उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
धेरै विश्लेषकहरूले सेना र इमरानबीचको सम्बन्ध गत वर्षको अक्टोबरदेखि नै बिग्रन थालेको विश्वास गर्छन्। त्यसपछि इमरान खानले पाकिस्तानको शक्तिशाली गुप्तचर एजेन्सी इन्टर स्टेट इन्टेलिजेन्स अर्थात् आईएसआईको नयाँ प्रमुखको नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे।
सन् १९४७ देखि करिब आधा समय पाकिस्तानमा सेनाले नै शासन गरेकोले पाकिस्तानमा सेना र नागरिक सरकारबीचको सम्बन्धमा लामो समयदेखि द्वन्द्वको इतिहास रहेको राजनीतिक टिप्पणीकार आरिफा नूरको भनाइ छ। तर आईएसआईमा जनरल फैज हमिदको उत्तराधिकारी छान्ने विषयमा सेना र इमरानबीच मतभेद भएको नूरको विश्वास छ।
इमरान खानले के गरे गल्ती ?
सिंगापुरका अनुसन्धानकर्ता अब्दुल बासित पनि यो मूल्याङ्कनसँग सहमत छन् र यो सबै कुरा इमरान खानको अहंकार र जिद्दी मनोवृत्ति भएको बताएका छन्। यसअघि आइएसआईमा नियुक्ति जस्ता विषयहरू पर्दा पछाडि तय गरिन्थ्यो तर यसपटक इमरान खानले सार्वजनिक गर्ने गल्ती गरेका छन् ।
अब्दुल बासित भन्छन्, ‘यसपटक इमरान खानले सेनाको ‘रेडलाइन’ पार गरिसकेका छन्। यद्यपि इमरान खानले पछि सेनाको मनपर्ने जनरललाई आईएसआई प्रमुख बनाउन राजी भए पनि त्यतिन्जेल दूरी निकै बढेको थियो।’ तर सेना र इमरान खानले ती दुईबीचको कुनै दरारलाई कडाइका साथ अस्वीकार गरेका छन्।
यसअघि पाकिस्तानमा दुईपटक प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावका कारण सत्ता त्याग्नुपरेको थियो । तर सन् १९८९ मा बेनजिर भुट्टो र सन् २००६ मा शौकत अजिजविरुद्धको प्रस्ताव अस्वीकार गरियो।
तर यसपटक संसदको समीकरणका कारण इमरान खानको पराजय निश्चित छ । अब पीटीआईका विद्रोही सांसदहरूले विपक्षीसँग मत नदिए पनि इमरानको पराजय निश्चित छ । सरकारले पीटीआईका विद्रोही सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पार्टीले आफ्नो मत गणना नगरी संसदबाट आजीवन बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले गठबन्धनलाई भेटेर आफ्नो जितमा विश्वस्त देखाउन खोजिरहेका छन् । उजैर युनुसको विश्वास छ कि इमरान खानले सहयोगीहरूलाई आफ्नो पक्षमा राख्ने मौका गुमाएका छन् र यदि उनी यस आँधीबाट बाहिर आए भने पनि उनको अगाडिको यात्रा निकै कठिन हुनेछ।
त्यसोभए योजना के छ ?
विपक्षीहरुले इमरानलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयास गरेपनि इमरान खान आफैंले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको श्रेय आफूलाई नदिइएको महसुस गरेका छन् ।
केही विश्लेषकहरू भन्छन् कि कोविडका चुनौतीहरूको बाबजुद पीटीआई सरकारले जनतालाई मद्दत गरेको छ। उनले कोविड विरुद्ध पाकिस्तानको युद्धको उदाहरण दिए। २२ करोडको देशमा १५ लाख मात्रै केस आए, ३० हजारको ज्यान गयो । यो संख्या भारतको तुलनामा निकै कम हो ।
कमेन्टेटर आरिफा नूर भन्छिन् कि यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो सफलता पञ्जाब र खैबर पख्तुनख्वामा सुरु गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम हो। उनी भन्छिन्,‘यो भविष्यको कुनै पनि चुनावमा ठूलो नारा बन्न सक्छ। कतिपयलाई कोभिडसँग सम्बन्धित समस्या नआएको होला तर स्वास्थ्य कार्डको बारेमा जनतालाई थाहा छ। यसको प्रभाव भविष्यमा पनि पर्नेछ।’
विपक्षीले निर्वाचित सरकारलाई ढालेर के हासिल गर्न चाहन्छ ?
तर के यो विपक्षी गठबन्धनले पाकिस्तानलाई आर्थिक र सामाजिक समस्याबाट मुक्त गराउन सक्छ भन्ने विषयमा आमचासो छ ।
आरिफा नूर भन्छिन्, ‘अहिले प्रतिपक्षले अवसरवाद देखिरहेको छ। दुर्भाग्य हाम्रो देशमा सत्ता हस्तान्तरणको कुनै नियम र नियम छैन। जब कोही सत्तामा हुन्छ, सत्ताबाहिरका मानिसहरूले उसलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गर्छन्।’
अब्दुल बसित भन्छन्, प्रतिपक्षको एउटै योजना भनेको सरकार ढाल्ने हो, सरकार ढलेपछि के गर्ने भन्ने गृहकार्य देखिँदैन । बासितले पाकिस्तान डेढ वर्ष लामो राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अघि बढेको महसुस गरेका छन् ।
उजेर युनुसले पनि विपक्षीसँग इमरान खानलाई हटाउने बाहेक कुनै योजना नभएको स्वीकार गरेका छन् ।युनुस भन्छन्,‘यदि प्रतिपक्ष सत्तामा आयो भने उसले धेरै अलोकप्रिय निर्णयहरू लिनुपर्नेछ। यी निर्णयहरूको राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्छ।’ उनीहरु भन्छन् कि जो कोही जितेपनि पाकिस्तानका जनताले हार्नेछन् । भावी चुनावहरू ध्रुवीकरण हुनेछन् र तिनीहरू नभएसम्म अस्थिरताको अवधि जारी रहनेछ।
यसैबिच प्रधानमन्त्री खानले अमेरिकासँगै देशका विपक्षीहरुले पनि उनलाई पदबाट हटाउन खोजिरहेको भन्दै जनतालाई विश्वास दिलाउन खोजिरहेका छन् तर, यी आरोपलाई विपक्षी र अमेरिकाले झुटो भनेका छन् ।
शनिबार अबेर राती इमरान खानले ट्वीट पनि गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘ कर्बलामा, इमाम हुसैन, उनका परिवारका सदस्यहरू र उनका समर्थकहरूले संसारलाई सत्य र असत्य बीचको भिन्नता बुझाउन आफूभन्दा धेरै संख्यामा शत्रुसँग लड्दै आफ्नो जीवन बलिदान दिए । आज हामी असत्य र देशद्रोहीविरुद्ध सत्य र देशको लागि लडिरहेका छौँ ।’ यो ट्वीटले सदनको विश्वास हासिल गर्नमा उनलाई समस्या हुनसक्ने कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यदि इमरान खानले विश्वासको मत गुमाए भने लण्डनमा बस्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफका भाइ शाहबाज शरीफ आगामी प्रधानमन्त्री हुने विश्वास गरिएको छ । शाहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बने भारत–पाकिस्तानको सम्बन्धमा थप दरार उत्पन्न हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । पाकिस्तानका वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी भन्छन् ‘अबको सरकार धेरै होसियार हुनेछ र भारत-पाकिस्तान सम्बन्धको अवस्था यथावत रहनेछ। शाहबाज सरिफको सरकार भारतप्रति नरम देखिन चाहँदैन।’ (बीबीसीकाे सहयाेगमा)